တပ်ဆင်မှုမှတ်တမ်း - ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွင်မသေဘဲ Slackware 14 ကိုထည့်ပါ | Linux မှ
ထည့်သွင်းမှုမှတ်တမ်း: ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွင်မသေဘဲ Slackware 14 ကိုထည့်ပါ။
eliotime ၃၀၀၀ | | အကြံပြုပါသည်, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ ငါဒီဆောင်းပါးကို Slackware 14 အကြောင်းရေးသားဖို့နှောင့်နှေးနေတဲ့အချိန်မှာငါဟာကွန်ပျူတာနဲ့သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနယ်ပယ်ရဲ့နောက်ဆုံးစာသင်ချိန်ကိုပြီးဆုံးတော့မယ့်အချိန်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးကွန်ပျူတာအခန်းကိုပြန်ပြုပြင်နေတယ်ဆိုတာငါပြောပါရစေ။ ယခုတွင်ငါသည်သင်ခန်းစာကိုသာယာတဲ့နှင့်ပိုမိုအသေးစိတ်ကျသောနည်းဖြင့်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
ယခင်ဆောင်းပါး၌Slackware နှင့်ကြုံတွေ့ရသောအတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့ပြီးသောအရာများသည်ကျွန်ုပ်အားသယ်ဆောင်သွားပြီးစိတ်အားထက်သန်မှုမှရှင်းလင်းခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ယခု၊ ဒီဒဏ္roာရီပုံပြင်များကိုဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောဤဆောင်းပါးတွဲများကို ဆက်လက်၍၊ သင်မေ့လျော့ထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့နှင့် Slackware 14 ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ DMoZ (အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများကို configure လုပ်သောအခါပေါ်လာတတ်သည့်အကြံပြုချက်အချို့) နှင့်အချို့သောအဆင့်များ၊ အထူးသဖြင့် format ချခြင်းနှင့်မကြာခဏရှင်းပြခြင်း။
သင်ကြည့်နေသောဆောင်းပါးသည်တုံ့ပြန်ချက်ဖြစ်သည် Slackware တပ်ဆင်ခြင်းသင်ခန်းစာ ငါတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် DMoZ မှပြုလုပ်သောဤအပျက်အစီးများအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပေးသည့်အတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်
အဆင့် ၁: Kernel ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်ပုံစံချခြင်း
လူအများစုကနားလည်ရန်ခက်ခဲသောစာလုံးများပါသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း Slackware သည် kernel ကိုအလိုအလျောက်မဖွင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကသင့်ကိုသေချာပေါက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ဖန်သားပြင်တွင်၎င်းသည်ကြီးမားသော console (ကြီးမားသောစာရိုက်ခြင်းများ) သို့မဟုတ် Pentium IV နှင့်နောက်ဆက်တွဲ (hugesmps.s) မှစတင်သော "ခေတ်မီသော" PC များဖြင့်သက်တမ်းကုန်သွားပြီဖြစ်သော Pentium III နှင့်နိမ့်ကျသောကွန်ပျူတာများအတွက် kernel ကိုရွေးချယ်ရမည်ဟုရှင်းပြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ PC သည်လုံလောက်သောအလုပ်လုပ်နိုင်လျှင် hugesmp.s ကိုရေးပြီးပေးလိုက်သည် ဝင်ရောက် ကျွန်တော်တို့ရွေးထားသော kernel ကိုသုံးရန်။
သူ၌ရှိနိုင်သောရွေးချယ်စရာများကိုထည့်သွင်းရန် "1" ကိုရေးသည်။ ဤကဲ့သို့သောမီနူးပေါ်လာလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင်လက်တင်ကီးဘုတ်ကီးဘုတ်ကိုငါရွေးသည်၊ ငါတို့ပေး ဝင်ရောက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကို, ငါတို့စမ်းသပ်စတင်:
ကြည့်ရသည်မှာသူသည်ကောင်းမွန်သောခံစားချက်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ပေး ဝင်ရောက်ပြီးရင် ၁ ကိုရေးမယ် ဝင်ရောက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြန့်ဖြူး၏ရွေးချယ်မှုအတည်ပြုနိုင်ဖြစ်ခြင်းငှါ၎င်း, မရရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်2ကိုရေးသည် ဝင်ရောက် ပြီးတော့ငါတို့လိုချင်တဲ့ကီးဘုတ် layout ကိုရွေးလိုက်တယ်။
အခုတော့ Slackware က superuser (သို့မဟုတ် ROOT) အနေဖြင့်ဝင်ရန်ပြောလိမ့်မည်။
"root" ကိုရိုးရိုးလေးရေးပါ ဝင်ရောက် ချက်ချင်းပဲငါတို့ disk ကို format လုပ်ရန် cfdisk သို့မဟုတ် fdisk ကိုသုံးသည်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောလိမ့်မည်။ ကျွန်တော့်အဖြစ်အပျက်မှာ cfdisk ကိုကျွန်တော်ရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီလျှောက်လွှာကိုကျွန်တော်သုံးခဲ့တယ်။
ကောင်းပြီ၊ သုံးရိုးရိုးရှင်းရှင်းသုံးခြင်းအားဖြင့်ဒီအသင်းကို ၂၀ GB နေရာနေရာ ၉၀% ကအဓိကယူနစ်၊ ၁၀% ကလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ထားတယ်။ ပို၍ တိကျစွာပြောရမယ်ဆိုရင် configuration ဟာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
SDA1 / Primary / Linux (option 83) / disk နေရာ၏ 90% ။
SDA5 / Logical / Linux လဲလှယ်ရေးစနစ် (option 82) / disk နေရာ၏ ၁၀% ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် "bootable" option ကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းကို main partition (သို့) swap partition တွင်သတ်မှတ်သည်။ format ကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ရန် "write" ကိုရွေးပြီး၊ ဟုတ်ကဲ့ဟုရိုက်ခြင်းဖြင့်အတည်ပြုပြီး "quit" option ကိုရွေးချယ်လိုက်သည်။
ပုံစံကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်း၏ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးသောအခါ၊ နောက်ထပ်တပ်ဆင်မှု၏အဆင့်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်“ setup” ကိုသာရေးသည်။
အဆင့် ၂: နောက်ဆုံးပုံစံချခြင်း၊ အစိတ်အပိုင်းများရွေးချယ်ခြင်း၊ စကားဝှက်ရင်းမြစ်၊ GUI ရွေးချယ်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက repo ၏ကြေးမုံရွေးချယ်မှု
ဤတွင်တပ်ဆင်မှု၏ "ရိုးရှင်းသော" အပိုင်းသည်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အသေးစိတ်ကျသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ "wizard" သည်ဤသို့ဖြစ်သည် -
ကျွန်ုပ်တို့သည်တပ်ဆင်မှုနှင့်အဆင်ပြေစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်“ ADDSWAP” ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လဲလှယ်areaရိယာ၏ငါတို့ရွေးချယ်မှုအတည်ပြု:
ယခုတွင် box တစ်ခုပေါ်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့ Hard disk တွင်မကောင်းသောကဏ္sectorsများရှိမရှိစစ်ဆေးရန် MKSWAP ကိုအသုံးပြုလိုပါသလားဟုမေးနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ hard drive သည်လုံးဝအဆင်ပြေသည်ဟုယူဆပြီး NO ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆိုပါစို့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ SWAP ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ပြီးကြောင်းအတည်ပြုသော box တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ OK ကိုပေး:
SELECT ကိုရွေးပြီးရွေးစရာသုံးခုပေါ်လာလိမ့်မည် - Format (format), Check (review or inspection), Skip (ဘာမှမလုပ်ပါ) ။ ၎င်းကိုအလုပ်လုပ်ရန်ပုံစံတစ်ခုပေးနိုင်ရန်အတွက် Format ရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်အဆင်ပြေရန် EXT4 ဖိုင်စနစ်ကိုအကြံပြုပါသည်။ နောက်ဆုံးပုံစံကိုအတည်ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိုကေဖြစ်သည်။ အောက်ပါပေါ်လာသည်အထိစက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ရသည်။
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းကန့်သည်လုံးဝချပ်ချပ်ပြီးသားဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ OK ကိုပေး။
Slackware ကို CD / DVD မှ၊ ကွန်ယက်မှတဆင့်တပ်ဆင်ရန်နှင့်၎င်းမှကမ်းလှမ်းသောအခြားရွေးစရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ရန် wizard မှပေးမည်။
ငါ 32-bit Slackware DVD ကိုသုံးနေတဲ့အတွက် package တွေကိုရွေးချယ်ရတာပြaနာမရှိဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည် OK ကိုပေးပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား“ အလိုအလျောက်” (အလိုအလျောက်) တပ်ဆင်လိုခြင်းရှိမရှိသို့မဟုတ်“ လက်စွဲစာအုပ်” (ခက်ခဲသောလမ်း) ရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့အားမေးမြန်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုရှုပ်ထွေးစေလိုခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်“ ကား” ကိုရွေးချယ်သည်။
သင်၌ရှိသော package များကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Slackware ကိုမည်သို့တပ်ဆင်လိုသည်ကိုရွေးချယ်ရန်စာရင်းကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ သူသည် Debian ၏ရွေးချယ်မှု menu နှင့်တူသည်။ ၎င်းသည် system ၏အစိတ်အပိုင်းများအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ငါတို့ပေးမယ်။
မြှားများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးစရာများကိုရွေးချယ်ရန်ရွှေ့သည်။ space bar နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်လိုသောရွေးချယ်စရာများကိုအမှတ်အသားပြုပြီးအမှတ်မထင်မှတ်သားထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မလိုချင်သောအရာများ၏ 8 သို့မဟုတ် 10 GB GB ကိုတပ်ဆင်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။
စဉ်းစားပြီးမည်သည့်ရွေးချယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက် OK ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ installation လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကိုမည်သို့ပြသမည်ကိုချက်ချင်းဖော်ပြလိမ့်မည်။
လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်ထည့်သွင်းထားသည့်အထုပ်တစ်ခုစီ၏ဖော်ပြချက်ကိုကြည့်ရှုရန်“ ပြည့်ဝသည်” ဟူသော option ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးထားသည်။
တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း Slackware သည်အက္ခရာစဉ်အစဉ်အလိုက်အထုပ်တစ်ခုစီကိုတပ်ဆင်ထားသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ထားသည့်အထုပ်တစ်ခုချင်းစီ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည် (၎င်းသည်မိနစ် ၂၀ မှတစ်နာရီလေးပုံသုံးပုံအထိကြာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ PC ၏, ဒါကြောင့်သင်ဤကာလ၏အားသာချက်ကိုအခြားအလုပ်များကိုလုပ်ဖို့တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးအဖြစ်ယူရန်အကြံပြု)):
ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်ပြီးနောက်သို့မဟုတ်အချိန်သတ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းသည် USB boot လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ Skip ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် Obvienlo ။
GRUB နှင့်အလွန်ဆင်တူသော LILO boot loader ကိုကျွန်ုပ်တို့ install မလားဆိုသည်ကိုယခုမေးခွန်းထုတ်လိမ့်မည်။ GRUB ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် GRUB ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် Skip option ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာ Slackware ထက် distro မရှိတော့ရင် Windows partition တစ်ခုမှမရှိဘဲရိုးရှင်းတဲ့ option ကိုသာရွေးပါ။ (ငါ LILO ကိုအခုထိမဖော်ပြသေးဘူး၊ ဒါကြောင့် Slackware အကြောင်းကိုငါရေးထားတာမှာငါတင်မယ်) ငါ၏အကြောင်းကို "သုတေသန"):
လာမယ့်မျက်နှာပြင်တွင်, သာယာသော wizard ကိုငါတို့ Slackware ကို default အနေဖြင့်စတင်အလုပ်လုပ်ချင်သောအရာကို resolution ကိုမေးတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည် Intel Integrated Video ကိုအသုံးပြုပါကသင်၏မော်နီတာအတွက်အကြံပြုထားသော resolution ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ မရရှိလျှင် Standard option ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင့်တော်တဲ့ resolution ကိုရွေးချယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ mouse option ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်။ PS /2port ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ရွေးမယ်။ USB port ပါသော Mouse ကိုအသုံးပြုရန် USB ဖြင့် option ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဘယ် mouse နှင့်အလုပ်လုပ်မည်ကိုအတည်ပြုပြီးသောအခါ network ကို configure လုပ်ရန်နောက်ထပ်လာလိမ့်မည်။
ကွန်ယက်အမည်ကိုရေးသည်။ DHCP ကိုရွေးချယ်ပြီး host name ကို "။ " နှင့်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ငါတို့လိုချင်သောကွန်ရက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်လိုက်သည်။
နောက်ထပ်ပေါ်လာမည့်မျက်နှာပြင်သည် console ဖောင့်ရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မလိုချင်ပါကသို့မဟုတ်ပုံမှန် terminal ဖောင့်အစက်များရှိပါကဟုတ်ကဲ့ကိုရွေးချယ်ပါသည်။
၎င်းကိုလုပ်ပြီးနောက် BIOS အချိန်ကိုအသုံးပြုလိုပါသလားသို့မဟုတ် UTC format ကိုသုံးမည်လားဟုမေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ပထမရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုနေသောအချိန်ဇုန်ကိုရွေးခဲ့သည် (အမေရိက / လီမာ)
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် desktop ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရွေးချယ်ရမည်။
ငါ KDE ကိုအထူးကြိုက်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ distro မှာအလင်းဘယ်လောက်ရသလဲဆိုတော့ငါရွေးလိုက်တယ်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် ROOT စကားဝှက်ကိုပြုပြင်မည်ဖြစ်သည်။
ငါတို့စကားဝှက်ကိုပေးပြီးမှ စူပါအသုံးပြုသူ၊ ၎င်းသည် installation ကိုမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပြီးပြီဟုကျွန်ုပ်တို့အားပြောလိမ့်မည်။
အဓိက menu သို့ပြန်ရောက်လာသောအခါ EXIT ကိုပေးသည်။ reboot ကို console တွင်ရေးပြီး Slackware CD / DVD ကိုထုတ်ပစ်လိမ့်မည်။
ပြန်လည်စတင်ပါက LILO menu သည် Slackware option ဖြင့်ပေါ်လာလိမ့်မည် -
ငါတို့ပေးပြီပြီးနောက် ဝင်ရောက် (စိတ်မရှည်စွာဖြင့်) သို့မဟုတ် system ကို boot လုပ်လိုက်ရုံဖြင့် ROOT စကားဝှက်ကိုတောင်းလိမ့်မည်။
ရွေးချယ်ထားသော GUI ကို X.org မှတဆင့် (ဤကိစ္စတွင် KDE) ကိုဖွင့်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့သော့ချက်ပေါင်းစပ်လုပ်ပါ alt + F2 “ console” ကို execute လုပ်ရန် box ထဲတွင်ရေးရန်, ငါတို့အဓိက repo ကိုသက်ဝင်စေမည့် console ဖြစ်သည်။
slackpkg ကသူဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြပေမယ့်အမှန်တရားကတော့လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာ repo ကိုကျွန်တော်တို့ configure လုပ်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ပြောတာပါ။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ console ထဲမှာရေးမယ်။
ကျွန်တော် kernel.org နှင့်တူသောမှရွေးထားသည့်မှန်များကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ သင်လုပ်ရမှာကသင်ရွေးချယ်လိုက်သောမှန်များနှင့်အခြားအရာအားလုံးကိုမဖြုတ်ပါနှင့်။
ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာကိုအောင်မြင်မှုတစ်ခုနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာက console ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ဒါကြောင့်ငါတို့ slackpkg ကို activate လုပ်တယ်။
ဒါကဒီနေ့အတွက်ပဲ။ လာမယ့်အပိုင်းမှာတော့ Slackware ကိုဘယ်လိုအဆင်သင့်သုံးရမလဲ၊ Slackbuilds ဘယ်လိုသုံးရမယ်၊ slapt-get ဘယ်လိုတပ်ရမယ်၊ Slackware ကိုငါတို့ဘာသာစကားနဲ့ဘယ်လိုဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုတာကိုအကြံပေးလိမ့်မယ်။
ငါမသွားခင် Slackware သင်ခန်းစာအတွက် DMoZ ကိုငါကျေးဇူးတင်ရမယ်။ သူတို့ကငါ့အတွက်တကယ်အသုံးဝင်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အကြံပြုပါသည် » ထည့်သွင်းမှုမှတ်တမ်း: ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွင်မသေဘဲ Slackware 14 ကိုထည့်ပါ။
ကောင်းပြီ, Slackware နှင့်အတူကလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ Gentoo သို့မဟုတ် Linux မှ Scratch မှ စ၍ ဟုတ်ကဲ့။
ငါ Gentoo ကိုသုံးခဲ့တယ်။ ငါအမြဲတမ်းစင်မြင့်3ကနေ install လုပ်ပြီးငါ့ကိုတစ်ခါမှမရိုက်ခဲ့ဘူး။ တစ်ခါတစ်လေမှာစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းပေမယ့်သင့်ရဲ့ PC ကတကယ့်ကိုပျံသန်းတာကိုမြင်တော့စောင့်ဆိုင်းရကျိုးနပ်ပါတယ်။
သူ gentoo နှင့်အတူပျံသန်းလျှင်, Arch နှင့်အတူသင်ပင်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ ...
ကောင်းပြီ၊ Slackware သည် Gentoo နှင့် Arch တို့နှင့်တန်းတူဖြစ်သည်၊ သို့သော်အနည်းဆုံးသင်၎င်း၏တွဲထားသောစာရွက်စာတမ်းများကြောင့်လမ်းပေါ်တွင်တစ်ယောက်တည်းရှိနေမည်မဟုတ်ပါ။
နောက်တစ်နည်းကဒါပေါ့။ Arch မှာအမြန်နှုန်းကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှသတိမထားမိသလိုပါပဲ၊ သင် install လုပ်ပြီးတာနဲ့အခြား distro တွေလိုပဲ။
ငါလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်လို့ထင်တယ်၊ အခက်အခဲတွေကြောင့်ငါပြောနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် Slackware မှာမင်းမှာဘာမှမရှိဘူး၊ ဒါကိုအများကြီး install လုပ်ဖို့မထိုက်တန်ဘူး၊ တစ်ချိန်ကထည့်သွင်းလိုက်တာကပုံမှန်အားဖြင့် install လုပ်ထားတာတွေအများကြီးပါလာတယ်၊ ဒါပေမဲ့သင်တပ်ဆင်ချင်တဲ့အခါ၊ ကျန်ရှိသောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်၎င်းကိုပြုစုရန်ဖြစ်သည်။
Omar leon အားစာပြန်ပါ
archlinux install လုပ်ခြင်းကိုသတိပေးသည် ...
Arch ၏ wizard ကိုသူတို့ဖယ်ရှားသည်အထိတူညီသည်။ ယခုသူသည်ရိုးရှင်းသော command များနှင့်လက်ဖြင့်လက်တွေ့တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။
ကောင်းပြီ၊ ဒါကငါ့ကို x86 installer ကိုသတိရစေတယ်
Android, WinXP သည် CLI install နှင့်အတူရောနှောနေသည်။
ကောင်းမွန်သောလမ်းညွှန်၊ အလွန်နှေးကွေးသောပစ္စည်းများသည်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိသကဲ့သို့အရာအားလုံးကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည် (တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများတွင်မပါရှိလျှင်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုပိုမိုရှင်းလင်းစေသည်) ။
root ကနေ graphical session တစ်ခုမလုပ်ခင် adduser command ကိုသုံးပြီးလက်ရှိအသုံးပြုသူကိုဖန်တီးတယ်၊ root session ကိုမထွက်ခင် user အသစ်နဲ့စတင်ပြီးတော့ startx ကိုထည့်ပါမယ်။
နောက်တစ်ကြောင်းတွင်ဤပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ပါမည်၊ ဘာသာစကားပြောင်းလဲခြင်း၊ sbopkg တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် slapt-get စသည့်အရာများကိုလည်းထည့်သွင်းပါမည်။
ဒါကငါ့ကို install လုပ်ဖို့သူတို့ပေးလိုက်တဲ့ပထမဆုံးပုံပျက် .. ငါ့အတွက်မလွယ်ဘူး၊ ဟဟာဟဟ၊ ဗားရှင်း ၉ ဆိုတာငါမှန်မှန်ကန်ကန်မှတ်မိနိုင်ရင် ၈ ဖြစ်ခဲ့ရင်၊ အဲဒီကတည်းကတပ်ဆင်မှုဟာအတူတူပဲဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူး၊ လုံးဝမပြောင်းလဲဘူး။
နှစ်ပေါင်းများစွာအတူတူပင်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သော installer တစ်ခုနှင့် Arch ကိုဤကဲ့သို့ဖြစ်စေလိုပါကြောင်း။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ ကျွန်ုပ်သည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ကိုထည့်သွင်းနေပြီးမည်သည့်အုပ်စု (ဘီး၊ floppy၊ အသံ၊ ဗီဒီယို၊ cdrom, plugdev, power, netdev, lp, scanner) ကိုမည်သည့်အုပ်စုထဲသို့မထည့်သွင်းပါ။ သင်မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကိုရှင်းပြနိုင်ပါသလား။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာ (laptop နှင့် desktop) တွင် Slackware -current သာရှိခဲ့သော်လည်းအခြားအရသာများကိုစမ်းကြည့်ရန်အတွက် Arch (ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်) အတွက် laptop နှင့်ကျွန်ုပ်၏ desktop အတွက် Fedora ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ desktop ၏ distro ကိုပြောင်းလဲရန်စီစဉ်နေပြီး၊ ကျွန်ုပ်ရွေးချယ်မည့်ရွေးစရာများမှာ၊ Debian သို့ပြန်သွားရန်ဖြစ်သည်။ Slackware ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
Slackware ကိုကျွန်ုပ်၏ netbook တွင်တပ်ဆင်ရန်စဉ်းစားနေသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ငါယောက်ျားရိုးရိုးသားသား "တပ်ဆင်မှုဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတာပြချင်ရင်မင်းဟာတပ်ဆင်ရတာခက်ခဲတယ်လို့မထင်ဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အလှူငွေနဲ့ငါ Slackware နှင့်ပတ်သက်။ အခြားပံ့ပိုးမှုများကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်
သင်ဖော်ပြသောအခက်အခဲအတွက် Gentoo နှင့် / သို့မဟုတ် Linux From Scratch ရှိသည်။ Slackware သည်သူ၏လက်ထောက်ကို SLS နှင့်ရှုပ်ထွေးစရာမလိုခြင်းကြောင့်ပထမဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအခက်အခဲကိုရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်အမှန်တရားကကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်သောကြောင့် Slackware wizard မှပေးထားသော“ manual” သို့မဟုတ်“ expert” ရွေးစရာများကိုအသုံးပြုခဲ့ပါကကျွန်ုပ်ပိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ ငါ install လုပ်သည့်အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်
ကောင်းပြီ သူ့ဟာသူ၊ ငါဟာအချိန်နည်းနည်းလောက်ဒါမှမဟုတ်ငါ့ရဲ့ဒီဂရီရဲ့စာသင်ခန်းကိုပြီးအောင်လုပ်ရမယ်၊ သူ့မှာရှိတဲ့အဆင့်မြင့်ရွေးချယ်စရာတွေကိုကြည့်ဖို့အချိန်အနည်းငယ်ရလိမ့်မယ်။
အရမ်းကောင်းတယ်၊ အရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါအခု openSUSE နဲ့ Slackware အတွက် Wall အသစ်လုပ်နေတယ်။
ငါတစ်ခုချင်းစီအတွက်အသုံးပြုသူအရေအတွက်တိုးမြှင့်ချင်တယ်၊ ဘာတွေပိုကောင်းလာသလဲ၊ distros တွေကိုပိုပြီးပြောင်မြောက်သော making ဖြစ်စေသည်
ယေရှုအစ္စရေးလူမျိုး Perales Martinez ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင် pc ၌ရက်အနည်းငယ်၊ ရက်သတ္တပတ် / လများစွာပါရှိသည်။ debian လည်းကျွန်ုပ်သည် fedora ကိုဖယ်ထုတ်။ မရပါ။ (ဤတွင်ကျွန်ုပ်အဆင်ပြေသောကြောင့် pretexts) သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် virtual machine တွင်တပ်ဆင်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော distro ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးတပ်ဆင်ခြင်းသည်မြန်ဆန်ပြီးနမ်းရန်ကပ်ပါသည်
ကောင်းပြီ၊ Slackware သည်ကျွန်ုပ်ယခုအထိအသုံးပြုခဲ့သည့်အလွယ်ကူဆုံး KISS distro ဖြစ်သည်။
ငါနောက်ဆုံးတော့ဆင်ခြေ ... ahem ... slak ကြိုးစားရန်အကြောင်းပြချက်😀ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!!!
လာမည့်ရေးသားချက်များတွင်နောက်ထပ်ပြင်ဆင်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်၏ saga ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းအပြင် Arch (သို့မဟုတ် Parabola GNU / Linux-Libre) + MATE + Iceweasel နှင့်ပတ်သက်သည့်ပို့စ်များကိုထပ်မံတိုးချဲ့လိမ့်မည်။
ကောင်းပါပြီ။ ကျွန်တော့်အတွက် Debian လိုနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းတွေမရှိဘူး။ ကြက်တစ်ကောင်ထဲထည့်လိုက်တယ်။
အဲဒါဟာကျိုးနပ်တဲ့ distro လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကမင်းကို ၁၀၀ လောက်လုပ်ဖို့မင်းမှာအချိန်အများကြီးလိုတယ်ထင်တယ် .... နောင်တွင်ငါ install လုပ်လိမ့်မည် * Ö *
ဖော်ပြချက် Eliot အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Slack အကြောင်းကိုယူဆောင်လာနိုင်သောအပိုဒေတာများကိုအမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားသည်။ slapt-get နှင့်ပတ်သက်သောသင်၏မှတ်စုများကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်သည်ပထမ ဦး ဆုံးအခိုက်အတန့်မှချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ခဲ့သည့်ဤအပျက်အစီးများကိုခုန်ပျံကျော်လွှားနိုင်ရန်များစွာကူညီလိမ့်မည်။
DMoZ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင်၊ Slackware တပ်ဆင်မှု၏အချို့သောအချက်များ (ဥပမာ - kernel ကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့် hard disk ၏သမာဓိကိုစစ်ဆေးခြင်းစသည်တို့) ကိုရှင်းလင်းနိုင်ရန်အတွက်အကူအညီဖိုင်များကိုသေချာဖတ်ရှုရန်ကျွန်ုပ်ခက်ခဲခဲ့သည်။ ငါ့ကိုပိုကြာသင့်တယ်ထက်ငါ့ကိုယူပါ။
စကားမစပ်တော့သူက slacky.eu repo အကြောင်းရှင်းပြဖို့သွားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းမေ့သွားခဲ့တယ်။ သူက install လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ binaries catalog ကြီးရှိပြီး slackbuilds လိုဖြစ်ပျက်နေသလို program တွေကိုမစုစည်းရဘူး။
Slackware သည်ရှုပ်ထွေးသည်မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားတွင်အချက်အလက်များစွာလိုအပ်သည်။ Desdelinux မှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ပြောင်းလဲနေသောအရာများအားလုံးသည် =) …
ခင်ဗျားတို့ကြိုဆိုပါတယ်။ Slackware ကို Slackware ကဲ့သို့ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုရန်နှင့်အနည်းဆုံးတော့ဤကဲ့သို့သောအချက်များနှင့်စိတ်စွန်းကွက်မှုမရှိဘဲသေချာစေရန်ငါအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသည်။
ဒီမှာ Slackware repos (သူတို့ slackbuilds ပါဝင်သည်) ၏စာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် http://www.slackabduction.com/sse/repolist.php
ခမ်းနားကြီးကျယ်လှ၏, သင်၏နောက်အရေးအသား၌ထည့်သွင်း ...
ငါ xfce ၌ဂရပ်ဖစ် session တစ်ခုစတင်မှီတိုင်အောင်အသုံးပြုသူဖိုလ်ဒါများ (ဂီတ, downloads နှင့်အခြား) ငါ Slackware ကို (စမ်းသပ်မှုများအတွက်ပိုမို) ကို install လုပ်သောကြိမ်, ငါ့ဖိုင်တွဲ kde နှင့်အတူပထမ ဦး ဆုံးလုပ်နေတာအချည်းနှီးသောဖြစ်နေဆဲနေကြသည်မဟုတ်။ ၎င်းကို kde ဖြင့်ထုတ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ် terminal နှင့်မအောင်မြင်လျှင်မည်သည့်နည်းလမ်းမှဖွင့်မရကျွန်ုပ်မသိပါ
ငါနှင့်အတူတူပါပဲဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်, ငါကအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါ, ဟုတ်တယ်, Xfce လွန်စွာမြန်ဆန်ပြီးအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့သည်, အမှန်တရားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ distro ဖြစ်ပြီး, ပို။ ပို။ အသုံးပြုသူများကစမ်းသပ်ရန်အချိန်ယူပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုငါထင်သူမြား၏တ ဦး တည်းဖြစ်၏ အသစ်စက်စက်အသုံးပြုသူများသည် GNU / linux သို့ပြောင်းလဲခြင်း၊ သင်ယူခြင်းနှင့်သင်ဆန္ဒရှိပါကသင်တက်ချင်လျှင်သင်နောက်ထပ်သင်ယူနိုင်ခြင်းရှိလျှင် Debian, Gentoo, Slackware နှင့် Arch တို့ရှိပြီးခန့်မှန်းရခက်သည့် (အချို့မဟုတ်ချေ) အခြားသူများရှိနေသည်။ သူတို့အားဒဏ္distrာရီ distros ။
Off-Topic - ဤဆောင်းပါး၏ထုတ်ဝေမှုတွင်ကျွန်ုပ်သည် Slackware mascot ကိုလည်းထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သို့သော်ဆောင်းပါး၏ပါ ၀ င်ချက်များတွင်၎င်းတို့ကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ ဒါဘာကြောင့်လဲ ဆောင်းပါးများကိုတည်းဖြတ်တာဘယ်သူလဲ။
ဆောင်းပါးပြီးရင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုပြီးအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါငါ distro ကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေချင်ခဲ့တယ်။
Euphoria ပီတိ ဟုသူကပြောသည်
ဆောင်းပါးအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားနိဒါန်းကိုဖတ်ပြီးနောက်အခန်းတစ်ခန်း၊ အထူးသဖြင့်လာမည့်လာမည့်အခန်းများကိုစောင့်မျှော်နေပါသည် (ကျွန်ုပ်သည်စပိန်ဘာသာဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံ / တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာရန်ကျွန်ုပ်အတွက်ခက်ခဲသည်) ။
သူ့ဟာသူ၊ ဒီ distro ကိုစပိန်လိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာကိုလေ့လာဖို့သိပ်စိတ်မဝင်စားဘူး။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် screenfetch ကို install လုပ်ပြီး Firefox 15 မှမှတ်ချက်ပေးသည့် screenshot တစ်ခုကိုချန်ထားခဲ့သည် https://blog.desdelinux.net/wp-content/uploads/2013/08/snapshot1.png?73b396
အကောင်းဆုံး, ဝေးနေဖြင့်။ !!
Eduardo Diaz အားပြန်ပြောပါ
ကိုယ့်အမေ! ဒီအရာတွေအတွက်ငါအသက်ကြီးလွန်းပြီ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးဂရပ်ဖစ်စနစ်ကိုဘယ်တော့မှမဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါ။
ကောင်းပြီ, ငါ slackware နှင့်အတူရှိခဲ့ကြောင်းငါ့မေးခွန်းတွေအများအပြားများအတွက် linuxquestions.com ရှာဖွေရန်အခက်အခဲယူ။ , စပိန်အတွက်အချက်အလက်အတော်လေးဆင်းရဲသည်။
Debian နှင့် Slackware များသည်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိခဲ့သောဒဏ္consideredာရီဖြစ်သည်။
ဤလှပသော distro နှင့်ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာမှာ Pulse Audio တပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းပြီးသော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှု၊
အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင်၊ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုရန်စီစဉ်ထားသော KISS distro သည်အဝေးဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
eliotime3000 @ အလွန်ကောင်းမွန်သောအလှူငွေ, ငါလာမည့် post ကိုကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အလွန်ကောင်းတဲ့အလှူငွေ ... ငါလာမယ့်အလှူငွေမျှော်လင့်နေပါလိမ့်မယ်။
ငါဟာ Slackware ကိုနှစ်နဲ့ချီပြီးအသုံးပြုခဲ့တာပါ။ သူကိုယ်တိုင်က install လုပ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံး distros တွေထဲကတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ သူတို့ဒီမှာပြောသလိုပဲသူကသူ့ရဲ့ installation method ကိုအစကတည်းကနဂိုအတိုင်းနီးပါးထားရှိမည်။
Bjorn Menten ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို! ငါစာကိုညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပေမယ့် Slackware ကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်သည် USB boot ချောင်းကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် ငါ LILO အကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖတ်ပြီးပြီ။ ယနေ့အထိကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုမှတ်ဉာဏ်မရှိပဲ boot မလုပ်နိုင်ပါကမည်သူမဆိုအလားတူပြproblemနာရှိပါသလား။ လေးစားပါတယ်
Bjorn Menten ကိုစာပြန်ပါ
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် install လုပ်ရန်ခက်ခဲသောဖြန့်ဖြူးမှုမရှိတော့ပါ။ သင်စာရွက်စာတမ်းများကိုသာဖတ်ရှုပြီးသေချာဖတ်ရှုပါ။
အဆုံးမှာတော့ startx ကို run လိုက်တယ်
Roberto Mejia ဟုသူကပြောသည်
ငါအဆင့်3ထက်ကျော်လွန်သွားဘူးဘယ်တော့မှသော်လည်းက xD ထွက်လာပုံကိုကြည့်ရှုရန် gentoo နှင့်အတူကြိုးစားကြည့်ဖို့ပိုနှစ်သက်တယ်
Roberto Mejia အားပြန်ပြောပါ
FromLinux - ၁၀ မိနစ်အတွင်းချက်တင်စကားပြောပါ
SDDM: အလင်းနှင့်လှပသော Session Manager [ArchLinux တွင်ထည့်သွင်းခြင်း]